Nani peptide upenyu huri nani
Shenzhen JYMed Technology Co., Ltd munhu yepamusorosoro zvebhizimisi vaita tsvakurudzo uye kukura, kugadzira uye commercialization pamusoro peptides yakavakirwa zvigadzirwa kusanganisira basa mishonga chirungiso peptides, zvizorwa peptides, uye tsika peptides uyewo itsva peptide zvinodhaka kukura. JYMed ane mbiri chose-vaiva subsidiaries: Shenzhen JYBio Pharmaceutical Co., Ltd uye hubei JY Pharmaceutical Co., Ltd, riri pasi kuvakwa.
【R & D centre】
R & D JYMed kuti pakati, iri Shenzhen, rinoumbwa kuti kutsvakurudza uye kukura itsva zvinodhaka zvinhu, peptide APIs uye akakodzera zvigadzirwa. Muzinda iri vakapakata ano peptide synthesizer, hombe-kukwanisa preparative kucheneswa hurongwa, uye zvokuridzira nzwisisika Analytical kusanganisira MS, HPLC, GC, UV, IC etc. The R & D centre rinopawo Michina rutsigiro zvitsva zvinodhaka yakawanikwa uye mukugadzira rikurumidze tama.
JYMed ane ina peptide API Kugadzirwa mitsetse muna Nanjing maererano FDA cGMP abvume, uye vaviri rapera dose yomuzvarirwo inogadzirwa mitsetse vari Shenzhen anogona zvokutengeserana batch ose peptide injectables diki kugona injectables uye -oma-kuomeswa upfu zvinhu pasi cGMP nhungamiro. Mukuwedzera, tiri kuvaka nezvitanhatu kugadzirwa mitsetse kuti peptide API muna Xianning, hubei dunhu, China, iyo ichava chimwe chezvisarudzo peptide API kugadzira chawo mu China.
JYMed ane kwakakwana uye vakarongeka peptide kwemaindasitiri hurongwa, vanogona Comprehensive peptide basa, kusanganisira CRO / CMO / CDMO / OEM uye pamutemo mabasa rutsigiro. Kuti kuva Your akavimbika, akazvimirira uye reactive nokutengesa nokuda peptides zvenyu!
Figures kiyi JYMed
● 315 vashandi munyika
● 2 RD mumarabhoritari (Pingshan, Nanshan)
● 3 kugadzira zvivako
● APIs, Nanjing Lishui, JiangSu, 4 kugadzirwa mitsetse achiita zvaidiwa FDA
● APIs, Xian'ning, hubei, 16 kugadzirwa mitsetse achiita zvaidiwa FDA (pasi kuvakwa)
● zvigadzirwa Finished, 2 chipimo chemushonga mitsetse muna Shenzhen Pingshan, GuangDong
● 7 zvigadzirwa pasi Anda kuna CFDA, 5 zvigadzirwa pasi pakunamata
● 1 chigadzirwa pasi IND kuna CFDA
● 1 chigadzirwa pasi VMF (US-FDA) uye vakawana Cep chitupa